Iintaka Ekuthethwa Ngazo EBhayibhileni—Yintoni Esinokuyifunda KwiiNtaka Zezulu (Yobhi 12:7-9)
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMaya IsiMyanmar IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNgesi IsiNias IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
“Khawuncede, ubuze, . . . Kwanezidalwa ezinamaphiko zezulu, zikuxelele. Ngubani na phakathi kwazo zonke ezi ongazi kakuhle ukuba sisandla sikaYehova esenze oku?”—Yobhi 12:7, 9.
KWIMINYAKA engaphezu kwe-3 000 eyadlulayo, usolusapho uYobhi wabona ukuba ininzi into esinokuyixelelwa ziintaka zezulu ngomsebenzi kaThixo wezandla. Izinto ezizenzayo zibangela ukuba kube lula ukwenza imizekeliso nezifaniso ngazo. Iivesi ezininzi zeBhayibhile ezithetha ngeentaka zezulu, zisifundisa izinto ezininzi ezibalulekileyo ngobomi nobuhlobo bethu noThixo. Nantsi imizekelo embalwa.
APHO ZIKHOYO IINDLWANE ZEENKONJANE
Zaziqhelekile iinkonjane kubantu baseYerusalem, kuba iindlwane zazo zazizenza phakathi kophahla nodonga lwendlu. Ezinye zazizenza etempileni kaSolomon. Kusenokwenzeka ukuba iinkonjane ezazisenza iindlwane zazo minyaka le etempileni zaziyibona iyindawo ekhuselekileyo yokukhulisa amantshontsho azo ngaphandle kweziphazamiso.
Omnye woonyana bakaKora owabhala iNdumiso 84 owayekhonza etempileni iveki enye kwiinyanga ezintandathu, wazibona ezo ndlwane etempileni. Wayebawela ukufana nenkonjane ehlala endlwini kaYehova. Wathi: “Hayi indlela othandeka ngayo umnquba wakho ozukileyo, Owu Yehova wemikhosi! Umphefumlo wam uphelile kukulangazelela iintendelezo zikaYehova. Kwanentaka iyifumene indlu, nenkonjane yazifumanela indlwane, apho iwabeke khona amantshontsho ayo—isibingelelo sakho esizukileyo, Yehova wemikhosi, Kumkani wam noThixo wam!” (INdumiso 84:1-3) Ngaba thina kunye nabantwana bethu siyakubawela yaye siyakuthanda ukusoloko sisebandleni kunye nabantu bakaThixo?—INdumiso 26:8, 12.
INGWAMZA IYALAZI IXESHA LAYO
Umprofeti uYeremiya wabhala wathi: “Ingwamza emazulwini—iwazi kakuhle amaxesha ayo.” Wayelazi kakuhle ixesha lokufuduka kweengwamza kwiLizwe Lesithembiso. Ngentwasahlobo, kwabalwa iingwamza ezimhlophe ezingaphezu kwe- 300 000 ezafuduka eAfrika zisiya eMntla Yurophu ngeNtlambo yaseYordan. Ithuku lazo lizinceda zikwazi ukubuyela apho zizalela khona. Njengezinye iintaka ezifudukayo, ‘ziligcina kakuhle ixesha lokungena kwazo.’—Yeremiya 8:7.
Incwadi ethi Collins Atlas of Bird Migration ithi: “Oku kufuduka kumangalisayo kwenzeka ngethuku.” UYehova uThixo wanika iintaka ithuku lokufuduka waza abantu wabenza bakuqonda ukutshintsha kwamaxesha. (Luka 12:54-56) Ngokungafaniyo neengwamza ezinethuku, eyona nto ibangela ukuba umntu awubone umqondiso weziganeko ezenzeka kula maxesha siphila kuwo kukwazi uThixo. AmaSirayeli exesha likaYeremiya ayengayiboni imiqondiso. UThixo wayichaza eyona ngxaki, wathi: “Ziligatyile ilizwi likaYehova, zinabuphi na ke ubulumko?”—Yeremiya 8:9.
Namhlanje sinobungqina obuninzi obubonisa ukuba siphila kwixesha iBhayibhile elibiza ngokuba ‘yimihla yokugqibela.’ (2 Timoti 3:1-5) Ngaba uza kufana nengwamza, ukubone ukutshintsha ‘kwexesha’?
UKHOZI LUBONA KUDE
IBhayibhile ithetha kakhulu ngokhozi, yaye kuxhaphakile ukuzibona ezi ntaka kwiLizwe Lesithembiso. Lukwindlwane yalo ekwingxondorha ‘lufuna ukutya, amehlo alo aqhubeka ekhangela mgama.’ (Yobhi 39:27-29) Iliso lokhozi libukhali kangangokuba kuthiwa liyakwazi ukubona umvundla okumgama oyikhilomitha.
Njengoko ukhozi ‘lukhangela mgama,’ uYehova uyakwazi ukubona ikamva. Yiloo nto xa ethetha ngaye esithi: “Lowo uxela ukuphela kwasekuqaleni, kwakudala izinto ebezingekenziwa.” (Isaya 46:10) Xa simamela imiyalelo yakhe, siya kuncedwa bubulumko bakhe obungenakuthelekiswa nanto nokukwazi kwakhe ukubona izinto ezingekenzeki.—Isaya 48:17, 18.
Kwakhona iBhayibhile ifanisa abo bathembela kuThixo nokhozi: “Abo bathembela kuYehova baya kufumana amandla kwakhona. Baya kunyuka ngamaphiko njengeenkozi.” (Isaya 40:31) Ukhozi lunyuka ngomsinga womoya obheka phezulu. Xa lufika kulo msinga, luye luthi saa amaphiko alo lujikeleze loo moya, lunyuke ngokunyuka. Ukuze lubhabhe luye kwiindawo ezikude, aluxhomekeki kumandla alo. Ngokufanayo, abo bathembela kuYehova banokuxhomekeka kuye ekubeni ebathembise ukubanika “amandla angaphaya koko kuqhelekileyo.”—2 Korinte 4:7, 8.
‘INDLELA ISIKHUKUKAZI ESIWAHLANGANISA NGAYO AMANTSHONTSHO ASO’
Kanye ngaphambi kokuba afe, uYesu wakhe wema wajonga idolophu elikomkhulu lakwaYuda. Ebuhlungu wathi: “Yerusalem, Yerusalem, mbulali wabaprofeti nomxulubi wabo bathunyelwa kuyo. Kufuthi kangakanani na ndifuna ukuhlanganisela ndawonye abantwana bakho, ngendlela esithi isikhukukazi sihlanganisele ngayo ndawonye amantshontsho aso phantsi kwamaphiko aso! Kodwa anavuma.”—Mateyu 23:37.
Enye yezona zinto zilisebenzisa kakhulu kuzo iintaka ithuku kukufuna ukukhusela amantshontsho azo. Iintaka ezineendlwane ezisemhlabeni, ezifana nenkuku, kufuneka zihlale zithe qwa ukuze zikhusele amantshontsho azo engozini. Xa isikhukukazi sibona ukhetshe ujikeleza phezulu, sitsho ngengxolo ebiza amantshontsho aso. Athi akuva le ngxolo abalekele phantsi kwamaphiko aso. Loo maphiko awakhusela naselangeni nakwimvula. NoYesu wayefuna ukunika abantu baseYerusalem indawo eyayiza kukhuseleka kuyo indlela ababemkhonza ngayo uThixo. Namhlanje, uYesu uyasimema size kuye ukuze asihlaziye aze asikhusele kwiingxaki namaxhala obomi bethu.—Mateyu 11:28, 29.
Zininzi izinto esinokuzifunda kwezi zidalwa zinamaphiko. Njengoko ubona indlela ezenza ngayo, zama ukuzikhumbuza ngezifaniso zeZibhalo ezithetha ngazo. Xa ucinga ngenkonjane, ingakunceda uyixabise indlu yokunqula kaYehova. Zama ukuthembela kuThixo ukuze akuncede ube njengokhozi. Vumela uYesu akukhusele ngenyaniso eseLizwini likaThixo njengesikhukukazi kumantshontsho aso. Yona ingwamza mayikukhumbuze ukuba kufuneka uhlale uyithele qwa imiqondiso eyenzeka kwixesha esiphila kulo.